Yiya kuluhlaza: Iindlela ezi-5 zokuyeka ukusebenzisa iiCD neeDVD | Martech Zone
Yiya kuluhlaza: Iindlela ezi-5 zokuyeka ukusebenzisa iiCD kunye neeDVD
NgoMvulo, Agasti 25, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokwe-EPA, zii-5.5 yezigidi ii-CD, ukupakishwa kwazo kunye nezigidi zezinye iiCD zomculo ziphoswa minyaka le ngaphandle kokurisayikilisha. IiCD neeDVD zenziwe ngeAluminiyam, iGolide, idayi, ezinye izinto ezahlukeneyo - kodwa uninzi lwazo zonke iPolycarbonate kunye neLacquer. IPolycarbonate kunye neLacquer ziveliswa ngokuthe ngqo kwioyile ekrwada.
Izibalo ziyaqhubeka, qho ngenyanga i-100,000 yeepawundi zeCD kunye neeDVD nazo azisebenzi. Akukho ndlela isebenzayo yokurisayikilisha izixhobo nokuba! Ngokwe- Icandelo leeOyile uqobo, malunga ne-1.1 yeelitha zebharile nganye (42 yeelitha) zeoyile ziya kwi-petrochemicals.
Ndicinga ukuba iya ngaphandle kokuthetha, emva koko, ukuba utshintshele kwilifu lekhompyuter kunye iiseva ezibonakalayo kunye nokubhalisela iSoftware njengezicelo zeNkonzo kunokunceda okusingqongileyo. Andiqinisekanga ukuba yeyiphi ipesenti yombhobho weoyile odala ii-compact disc, kodwa ngokuqinisekileyo sinokuba nempumelelo ngakumbi ngokusebenzisa iidrive ze-USB kunye neenethiwekhi zokwabelana ngefayile endaweni yokutsha kweediski.
Ukwengeza kwi usebenzisa Iidiski, andikwazi ukunceda kodwa ndicinge ukuba amandla amaninzi asetyenziselwa ngokungeyomfuneko ukwenza kunye nokuhambisa ezo diski. Ngokuqinisekileyo ukutshintsha umda wendlela yeplastiki kuya kuba sisiphumo esifanelekileyo kuluntu, akunjalo? Ndiyaqonda ukuba zikhona ezinye izinto ezininzi edlala indima enkulu, kodwa kutheni kungekho mntu uthetha ngale mveliso ingeyomfuneko?
Ndiyazibuza ukuba kutheni usebenzisa Isoftware njengeNkonzo ayisiyonxalenye iphambili ye- Ukuya kuluhlaza ukucebisa kumashishini? Iidrabyte hard drive, ii-USB drive, ii-Backups ezikwi-Intanethi… zonke ezi zinto zifikeleleka ngokulula kuye nabani na ukuba azisebenzise. Akukho mntu ufanele ukuthenga iiCD kunye neeDVD kwakhona. Andisaqeshisi iimovie kwakhona kwiDVD, ndiyazirenta kwezam I-AppleTV!
Iimbono ezi-5 zokuKunciphisa isiyobisi sakho seCD
Tshintshela kwiSoftware njengeNkonzo. Imizekelo: Yilahla iOfisi yeMicrosoft yeeNkqubo zikaGoogle kunye neMicrosoft CRM yeNtengiso. Akukho fakelo, akukho backups, akukho zixhobo zekhompyutha… isikhangeli nje!
Tshintshela ekuqeshweni kweeDVD kwaye uthenge iiCD zomculo ukhuphele ukuthengwa kwakho koMculo okanye iiRendi eziQeshiswayo iTunes, AppleTV kunye nezinye iinkonzo zepremiyamu. iTunes kusenokufuneka iphinde icinge ilogo yazo!
Tshintshela kulondolozo kunye nokuhambisa idatha kwiiCD nakwiiDVD kwiiDrive Drives. Iidrive ze-USB zibamba idatha ngakumbi kwaye ziyaphatheka, zikhawuleza, kwaye azidinwa. (Lumka ke, ayizizo zonke iidrive ze-USB ezenziweyo zilinganayo!) Zithengele idrive enkulu ephathekayo yokuxhasa umsebenzi wakho kwaye uhambise ngapha nangapha ukuya emsebenzini. Andiyi ndawo ngaphandle kwam Ipasipoti yaseNtshona yedijithali, lolona tyalo mali ndilwenzileyo!
Dlulisa iifayile ezinkulu kwezinye iinkampani ngokusebenzisa abathengisi be-SaaS abakwi-Intanethi abathanda Yilahla, Uyithumele, Thumela leFayile, ImeyileBigFile, yaye SendSpace.
Lahla iiCD zakho kunye neeDVD. Xa u-odola ilaptop yakho elandelayo, ungafaki enye kunye nokuthenga. Xa uzi-odola iofisi yakho, gcina imali kwaye uthenge ii-drive ze-USB endaweni yokuphucula umbhali weDVD. Ngokungazifikeleli, uya kuba mancinci amathuba okuba uyitshise le CD izayo!
Ngapha koko, ekuphela kwesizathu sokuba ndisebenzise iiCD kwakhona kukuba iincwadi zikwiCD okanye ukutshisa umculo xa ndisiya naxa ndibuya emsebenzini. Bendiwabukele amaxabiso, nangona kunjalo, kwaye ndingafumana indawo yestereo yemoto enegalelo le-USB kunye nolawulo lwe-iPod engaphantsi kwama- $ 200! Mhlawumbi lixesha lokuba ndenze intshukumo!
IAddsense kaGoogle ngoku ukwenza imali ukondla kwam
Agasti 28, 2008 ngo-1: 07 PM
Ndoda, khange ndiqonde ukuba sonke sisebenzisa iiCD kunye neeDVD kangakanani ndide ndifunde iposti yakho. Nangona ndingatsho ngokuzingca ukuba sele ndenza #s 1, 3 kunye 4 kuluhlu lwakho!